Ụbọchị: 9 August 2019
Obodo Istanbul Metropolitan weere ihe niile dị mkpa iji hụ na ezumike dị jụụ na udo dịịrị ụmụ amaala. Iji gbochie ọhụụ ọ bụla na tupu ememme nke obodo Istanbul Metropolitan Municipality, mpaghara niile dị mkpa na usoro dị mkpa [More ...]
Obodo Ankara mepere emepe ya na ndị otu ya na ndị otu ya ka ha mezuru Eid al-Adha n’udo na nchekwa. N'oge 4 Eid al-Adha kwa ụbọchị; (11-14 August 2019) Otu n'ime ọrụ ụgbọ njem ọha na eze n'ime EGO [More ...]
Minister Turhan, onye otu AK Party osote onye isi oche Hayati Yazici, Rize Gọvanọ Kemal Ceber, ndị otu omebe iwu AK Party Rize Osman Askin Bak na Muhammet Avci, ndị isi ụgbọ elu Rize-Artvin nwetara ozi site na nyocha. Turhan, nyocha [More ...]
Kahramanmaraş mepere emepe kwuru n’oge Eid al-Adha ga-ebu ndị njem ụgbọ ala na-enweghị isi n’efu. Ngalaba Transportgbọ njem na Kahramanmaraş Metropolitan na-abịaru Eid al-Adha tupu ozi ọma abịa. Na nkwupụta, 4 Eid al-Adha kwa ụbọchị [More ...]
Latgbọ njem ndị isi obodo nke Malatya Metropolitan Municipal (MOTAS) ga-enye ụmụ amaala ọrụ njem ụgbọelu n’oge Eid al-Adha. 11 - 14 Ndi di na nwunye, ndi enyi, ndi ikwu na ogha [More ...]
Gbọ njem na Eskisehir N'efu
Obodo Eskişehir Metropolitan, ya na mkpebi otu Mgbakọ Mịnịstrị, yana Mgbakọ Ramadan nke Eid al-Adha na ụgbọ ala nke obodo ga-arụ ọrụ n'efu. Na mgbakwunye, ụmụ amaala nwere ike ịme nleta oriri n'okporo ámá n'ụzọ dị mfe [More ...]
A ga-enwe ezumike na Antalya na ebe a na-elekọta mmadụ
Gbọ ala USB, Zıp Zıp Park, Topçam, Sarisu na-eche gị. Antalya Isi Obodo ANET AŞ. ụlọ ọrụ na-elekọta mmadụ ga na-arụ ọrụ ga-aga n'ihu na-enye ọha na eze ọrụ dị mma na Eid al-Adha. Ügbọ ala Tünektepe, isumụ nwanyị Sarisu, Mpaghara ntụrụndụ Topcam na [More ...]
Onye isi obodo Bursa Alinur Aktas, ụmụ amaala, Eid al-Adha dị n'udo ma dịkwa mma iji bie ndụ n'obodo niile. Onye isi obodo nke Bursa Metropolitan Munin Alinur Aktaş kwuru Kur Bursa [More ...]
Usesgbọ ala eletrik na ụgbọ ala na Manisa
Obodo Manisa, 4 kwa ụbọchị n'oge ụmụ amaala Eid al-Adha iji zere nsogbu ụgbọ njem na mpaghara niile nke ụgbọ ala na-acha uhie uhie n'ime obodo nke ụgbọ ala eletrik nke MANULAŞ na-enye ọrụ njem na-ekwupụta na ọrụ n'efu. 11-14 August [More ...]
Transportgbọ njem ọhaneze N'oge Bayram N'oge Kayseri n'efu
Onye isi obodo nke Obodo Kayseri Memduh Büyükkılıç mara ọkwa na ụgbọ njem ọha na-agaghị akwụ ụgwọ n'oge Eid al-Adha. Onye isi obodo Büyükkılıç kwuru na ụmụ amaala na-eji bọs na usoro ụgbọ oloko ga-erite uru site na ụgbọ njem n'anaghị ego. Onye isi obodo nke Obodo ukwu Memduh Büyükkılıç, na njem [More ...]
Xbọchị 2 izizi nke oriri na ingbọ njem Konya n'efu
Obodo Konya, ụmụ amaala weere ihe dị mkpa iji nọrọ Eid al-Adha mee udo na udo. Obodo ukwu, ụmụ amaala, bọs na trams na-eleta ezumike iji hụ na mbọ dị mkpa iji mee ka ahụ dị mma. Mkpokọta iji rụọ ọrụ na nnọkọ Sunday [More ...]
Njikere Ezumike nke Akçaray
Gbọ njem na Akçaray tramPark ndị ọzọ ka ogige ahụ mere. Nkwadebe nkwadebe maka ụmụ amaala ibi ndụ megide oke nke oke iwe nwere ike ime ememme ahụ. The Direction Systems Directorate, bụ ndị zukọrọ tupu oriri a ma nwee nzukọ; nhicha, sistemụ na-agba ọsọ, tram [More ...]
Gbọ a na-ere mmanụ na Dilovası Ejiri ya na Oldzọ Oge Ochie
Dilovası Eynerc Junction (East) ga-eme ka ọnụ ụzọ mbata belata ma pụọ ​​na mpaghara “Ihe oru Dilovası Eynerc Junction Yavuz Sultan Selim Street Connection Work Work” na-aga n’ihu ngwa ngwa. N'ime oke ọrụ ahụ, ebe a na-emezigharị ụdị ọhụụ nke Yavuz Sultan Selim Street, [More ...]
Ntinye di nkpa na oru ngo URAYSİM!
Atụmatụ mmepe mbụ nke Usoro Ọchịchị Onye isi ala, Usoro Nchịkwa Mba [More ...]
Aydın Denizli Motorway Tender Again Akwụghachi
Aydın Denizli Motorway gbanwere ịbụ ihe omimi zuru oke. Tenderlọ ọrụ na-ahụ maka okporo ụzọ abịanyeghị akwụkwọ nkwekọrịta a. Ya mere, a kagbuola ịdị nro ahụ ọzọ. Ezi Party Denizli osote Yasin Ozturk, onye dị nro maka ozi ọma n'ihu ndị otu AK Party [More ...]
Line Trailzon Erzincan High Speed ​​Railway
Mehmet Cahit Turhan, Mịnịsta nke Transportgbọ njem na akụrụngwa, onye bịara na Trabzon maka Nnọchianya Onyinye nyere nkọwa dị mkpa banyere ilgbọ okporo ígwè Erzincan Trabzon. Minista Turhan kwuru na ha bidoro ọrụ Trabzon-Erzincan High Speed ​​Railway Line wee kwuo, için Maka nkwadebe nke oru nyocha ahụ. [More ...]
MMO na-akwado mkpọsa mbinye aka na-aga n'ihu na Yahya Kaptan
Berlọ nke ndị injinia Mechanical President Murat Kürekçi na ndị otu ndị isi, Yahya Kaptan ịgbanwe ụzọ ụgbọ ala iji kwado mkpọsa mbinye aka na-aga n'ihu. Kürekçi kwuru okwu dị mkpa ebe a. Yahya Kaptan jiri usoro ikpo okwu gbanwe ụzọ ụgbọ okporo ụzọ [More ...]
Ihe aga - eme na usoro nke nchekwa okporo ụzọ n'oge ezumike
MMlọ TMMOB nke ndị injinia mepere, ezumike ezumike na nchekwa nke okporo ụzọ n'ihe ụfọdụ ị ga-akpachara anya ka ndị ọkwọ ụgbọ ala na ndị isi wee dọọ ịdọ aka ná ntị n'isi. Eid al-Adha 11-14 dị na August, mana jikọtara ya na ngwụsị izu [More ...]
Ebe a na-adọba ụgbọala n'efu na Bayramda na Kocaeli
Ebe a na-adọba ụgbọala nwere ebe a na-adọba ụgbọala na Belde A.Ş. Citizensmụ amaala nwere ngwa ga-aga n'ihu n'oge oriri ahụ, ụgbọ ala agaghị enwe ụkọ ebe a na-adọba ụgbọala. 4 DAY APPLICABLE Kocaeli Isi Obodo, Eid al-Adha [More ...]
UEFA Super Cup Final n'ihi ụfọdụ okporo ụzọ ga-emechi
N'ihi N 2019 UEFA Super Cup Final acak a ga-egwu na Istanbul, 14 na 15 ga-emechi ụzọ maka oge ụfọdụ na awa 15 na Besiktas na Ọgọst. N 2019 UEFA Super Cup Final anan na-egwuri egwu na mbu na Istanbul site na nkwado nke obodo Istanbul Metropolitan [More ...]
Nyefe Bayrampaşa Bus Station Parking Lot na İSPARK
Ebufere ọdụ ụgbọ ala Bayrampaşa Station na ISPARK, otu n'ime ụlọ ọrụ IMM, na mkpebi Mgbakọ Assembly. N'oge usoro mbufe, Secretary General General Yavuz Erkut na ndị otu ya gbasoro ọrụ ahụ. Otu oge na ọdụ ụgbọ ala Bayrampaşa kwụsịrị taa [More ...]
Ationgbọ njem Ọhaneze 30 na Istanbul na August na Eid al-Adha Free
Obodo Obodo Obodo Istanbul, Eid al-Adha, 30 Day Victory Day na ụlọ akwụkwọ ga-emeghe na Mọnde na Septemba 9 ụgbọ njem ọha na Istanbul kpebiri na ha ga-enye ọrụ n'efu. Metrolọ Ọrụ Nkwuputa Obodo Obodo nke Istanbul, nke onye isi IMM bụ Ekrem Imamoglu bu onye isi oche [More ...]
Ankara YHT Station Clọ CIP Emepee
Onye isi njikwa nke TCDD, Ali İhsan Uygun, TCDD Taşımacılık A.Ş. Onye isi njikwa Erol Arıkan na VakıfBank General Manager Abdi Serdar Üstünsalih 08 August 2019 mepere na Tọzdee na ememme. TCDD [More ...]
Ejiri Tunç Soyer mee ya na ndị ọrụ İZBETON na ELZELMAN
Onye isi obodo Mayor çzmir nke obodo Tunç Soyer zutere ndị ọrụ İZBETON na İZELMAN dịka ndị bịara nleta mmemme ahụ na ụlọ ọrụ ndị metụtara obodo ahụ. Onye isi obodo ukwu Izmir nke obodo Tunç Soyer gara oriri mmemme na Belkahve Facilities nke İZBETON General Directorate. [More ...]
Ationgbọ njem ọha na İzmir n'efu
İzmir Metropolitan Obodo ga-enye ndị njem ọhaneze njem n’oge Eid al-Adha. Ngwa a ga-adị irè maka bọs, ụgbọ okporo ígwè na njem ụgbọ mmiri. Iji mee ka nleta nke Eid al-Adha gakwuru ndị Izmir, Obodo Izmir [More ...]
Ationgbọ njem ọhaneze Mgbe ezumike na Antalya
Mgbe nyocha nke Antalya Metropolitan Transportation Coordination Center mere nyocha, emere mgbanwe ọnụahịa n'ụgwọ njem ụgbọ njem ọha. Tartụ ọnụego ọhụrụ ga-adị irè dịka nke 15.08.2019. Cogbọ njem njikwa njem (UKOME) 2 [More ...]
Taa na History: 9 August 1909 Holiday-Equality Law
Taa na History 9 August 1909 Holiday-i Equality Law wepụtara. (Strike Iwu)